Messier 87 - ဝီကီပီးဒီးယား
﻿ကိုဩဒိနိတ်: 12h 30m 49.4s, +12° 23′ 28″
ဟာဘယ် အာကာသမှန်ပြောင်း၏ Messier 87
ညာဘက်တိမ်းစောင်းမှု 12° 30′ 49.42338″
နိမ့်ဆင်းမှု +12° 23′ 28.0439″
ထောင့်ဖြတ် အချင်း(V) ၇.၂ × ၆.၈ moa
ပကတိအရွယ်အစား (V) ၉.၅၉
ဂလက်ဆီ အမျိုးအစား E+0-1 pec, NLRG Sy
၁၃၀၇ ± ၇km/s
၀.၀၀၄၃၆၀ ± ၀.၀၀၀၀၂၂
၁၂၅၄ ± ၇ km/s
၅၃.၅ ± ၁.၆၃ Mly (၁၆.၄၀ ± ၀.၅၀ Mpc)
အခြားကြည့်ရန်: ဂယ်လက်ဆီ၊ ဂယ်လက်ဆီစာရင်း
Messier 87 (Virgo A သို့မဟုတ် NGC 4486 ဟုလည်းသိထားကာ M87 ဟုအများစုသုံး) သည် ဧရာမ ကြီးမားသော ဘဲဥပုံစံ ဂလက်ဆီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဗာဂိုး ကြယ်စုတန်းတွင် တည်ရှိပြီး မိမိတို့၏ အနီးအနား စကြာဝဠာရှိ အကြီးမားဆုံး ဂလက်ဆီများထဲမှ တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်လေသည်။ နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ M87 တွင် globular cluster ပေါင်း ၁၂၀၀၀ ပါဝင်ပြီး ပင်မအူတိုင်မှ အပြင်ဘက်သို့ အနည်းဆုံး ၁၅၀၀ parsec (အလင်းနှစ် ၄၉၀၀) ဖြန့်ကျက်ထားသည်။ M87 သည် အတောက်ပဆုံး ရေဒီယိုပင်ရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပေရာ အပျော်တမ်း နက္ခတ္တပညာရှင်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလေ့လာမှုအတွက်ပါ ပစ်မှတ်ဖြစ်လေသည်။ ပြင်သစ် နက္ခတ္တပညာရှင် Charles Messier သည် M87 အား ၁၇၈၁ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ M87 သည် ကမ္ဘာမြေမှ အလင်းနှစ် ၅၃.၅ မီလီယံ (၁၆.၄ parsec) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ အလယ်ဗဟိုတွင် အင်မတန်ကြီးမားသော တွင်းနက်တစ်ခု ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Lambert, S. B. (January 2009). "On radio source selection to defineastable celestial frame". Astronomy and Astrophysics 493 (1): 317–23. doi:10.1051/0004-6361:200810582. Bibcode: 2009A&A...493..317L.
↑ Luginbuhl, Christian B.; Skiff, Brian A. (1998)။ Observing Handbook and Catalogue of Deep-Sky Objects (2nd ed.)။ Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press။ p. 266။ ISBN 0-521-62556-4။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ Results for NGC 4486။ NASA/IPAC Extragalactic Database။ California Institute of Technology။ 22 October 2006 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Select the "By Name" cell, then enter "NGC 4486" in the "Object Name:" field of the query form.
↑ Turland, B. D. (February 1975). "Observations of M87 at5GHz with the 5-km telescope". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 170: 281–94. doi:10.1093/mnras/170.2.281. Bibcode: 1975MNRAS.170..281T.
Wikimedia Commons တွင် Messier 87 နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Messier_87&oldid=716376" မှ ရယူရန်